Tag: akara 37 | Martech Zone
Kpido: akara 37
N'oge gara aga, abụ m onye na-akwado 37 Signals. Ekwenyere m na ha dị n'ihu ụbọchị ha na nhazi ọrụ na njirimara dị mfe. Akwụkwọ ha, Inweta Ezigbo, ka enwe mmetụta na etu m siri zụlite, rụpụta ma wuo ngwaahịa chọrọ. M tinye n'ọrụ a na Basecamp akaụntụ na esoro ọtụtụ ndị m oru ngo na ndị ahịa na e ebe ikpeazụ okpomọkụ. Mgbe m na-agụ 37 Signals blog na afọ gara aga, achọpụtara m na ụda